Maalinta: Sebtember 2, 2019
Xad gudubyada Manisa Taasi waa Jebinta!
Cabashooyinka ku saabsan guuldaradii Martyrs iyo Veterans Pedestrian overpass ee ay dhistay Dowlada Hoose ee Magaalada Manisa ee ku taal Mimar Sinan Boulevard oo ah baxsadki ugu horreeyay ee Manisa. [More ...]
Mid ka mid ah maal-galiyeyaasha ugu weyn ee World Biin Marathon Championship oo ay martigelisay Sakarya 2020 ayaa ahayd Brisa Lassa. Isaga oo hadlaya ka dib xafladda saxiixa, ayuu madaxwaynaha Ekrem Yüce yiri, “Horyaalka waxaa lagu qaban doonaa magaaladeena. [More ...]
Go'aanka Baasaboorka Gaarka ah ee Dadweynaha ee UK, Minibus, Taksi Dolmu Bus, Baska Dowladda Hoose, Adeegga Ardayda iyo Shaqaalaha iyo canshuuraha tagsiga ayaa loo habeeyay celcelis ahaan 22. Cashuurihii cusboonaysiinta ee 27 [More ...]
Muddada Kaarka Single 'wuxuu ka bilaabmay Gaadiidka Ankara
Muddadii gaadiidka lagu qaadanayay hal kaar ayaa ka bilaabatay Ankara. Ilaa maanta, Ankarakart kaliya ayaa loo adeegsan doonaa basaska gaarka loo leeyahay (ÖHO). Ankarakart waa lacagta loo yaqaan '3 lira 25 penny'. Basaska EGO, Ankaray, metro, gaariga USB iyo kuwa gaarka loo leeyahay [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara ayaa kordhisay khidmadaha gaadiidka dadweynaha ee caasimada sababta oo ah qarashka oo kordhaya Iyadoo la raacayo qawaaniinta cusub ee joogtaynta adeegyada gaadiidka dadweynaha ee ku saleysan mabaadi'da wax ku oolka, dhaqaalaha, hufnaanta iyo joogtaynta, ANKARAKART [More ...]
RayHaber 02.09.2019 Warbixinta Shirka
Adeegga Mashruuca Sahaminta ee Horumarinta Dhul-gariirka
Xiriirinta tuneelada Boztepe ee leh qaab dhismeedka cusub ee dhismaha Wadada Kanuni Boulevard waxay leedahay jawaab celin weyn. Mitirrada '100' way dhaafi doonaan cagaha korkooda oo lagu dhex dhejin doono laabta calaamadaha Trabzon. Dagger ilaa laabta magaalada [More ...]
Kumanaan 10 Istanbul ah oo Daawaday Dayax gacmeed Gawaarida Cas ee Kubadda Cagta Adduunka
Koobka Aduunka ee 'Red Bull Car Park Drift World Final', oo ay martigeliso Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, ayaa farxad weyn ka muujisay dadka deggan magaalada Istanbul dhammaadka wiigga. Duuliyaha 16 18 oo ka kala yimid dalal kala duwan ayaa la diriray tartan adag oo udhaxeeya Jordan Pilot Anas Al [More ...]
Qandaraaska Konya Metro in la qaban doono bisha Sebtember
Injiilka Metro ee ka socda Madaxweyne Erdoğan illaa Konya. Isaga oo ka hadlaya xafladdii furitaanka ee Konya, Erdogan wuxuu yidhi, “Waxaan bilaabeynaa dhismaha kontoroolada Konya. Jilicsanaanta wejiga koowaad ee xaruntan waxaa la fuliyaa bisha Sebtember. ” Erdogan ayaa khudbadiisa ku sheegay, stagen marxaladi koowaad ee xariiqan [More ...]
Taariikhda Trams ee Konya
Warkani, Konya, waqtiga gaadiidka dadweynaha by tram "1992 sanadka" wuxuu jabin doonaa xusuusta kuwa yiri bilowga sanadaha iyadoo la adeegsanayo 1900'lu Istanbul iyo Izmir, iyo sidoo kale dagaalkii Balkan ee 1912 ee ciidamada Giriiga ilaa la qabtay. [More ...]